Coronavirus: nanokana 750 miliara euros ny Banky foibe eoropeanina | NewsMada
Coronavirus: nanokana 750 miliara euros ny Banky foibe eoropeanina
Par Taratra sur 20/03/2020
“Ady iraisam- pirenena amin’ny fahasalamana ny tsimokaretina Coronavirus”, hoy ny filoha frantsay, i Emannuel Macron. Manokana volabe, amina miliara euros, ny firenena mpikambana ao amin’ny Vondrona eoropeanina, hiatrehana izany. Mampiomana koa, etsy andaniny, ny Vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS), hiomana sy handray fepetra fa ho ratsy ny zava-misy aty Afrika.
Olana maneran-tany ny tsimokaretina Coronavirus, miparitaka maneran-tany. Nilaza ny mpitondra sinoa fa voafehin’izy ireo ity aretina ity satria tsy misy intsony ny fiitarany, voatsabo ireo marary. Saingy, tsy izany ny mitranga any amin’ny firenena hafa, na ny any amin’ny firenena mandroso any Eoropa, toa an’i Italia sy i Frantsa. Satria tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny maty. Hentitra ny fepetra raisin’ny firenena manan-katao satria nanokana 750 miliara euros ny Banky foiben’i Eoropa (BCE), hanonerana, handoavana ny trosan’ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina, ao anatin’ny Vondrona eoropeanina (UE). Ankoatra io, efa nanokana volabe ny firenena tandrefana tsirairay, hanentsenana ny banga amin’ny fatiantoky ny firenena tsirairay avy. Ao anatin’izany ny hanomezan’ny fanjakana vola ny mpikarama amin’ny sehatra isan-tsokajiny, toy ny mpiasa isam-bolana sy ny miasa ho an’ny tenany.
Na miaina anatin’ny tsena malalaka aza ny firenena eoropeanina, anisan’ny “safidy” mety horaisin’izy ireo ny fandraisana ireo orinasa tsy miankina ho an’ny fanjakana. Anisan’izany ny kaompania fitaterana ana habakabaka Air France, sy ny orinasa mpanamboatra fiarakodia PSA, ohatra. Antony, hanome vola mivantana, hanentsenana ny fatiantoka, vokatry ny krizy toekarena, ateraky ny Coronavirus, ny fanjakana. Marihina fa nanokana vola manodidina ny 45 tapitrisa euros ny fanjakana frantsay ho an’ny mpampiasa, ny orinasa tsy miankina, hanentsenana ny banga manoloana izao aretina Coronavirus izao.
Nampiomana ny OMS
Tsy mbola tonga eto Madagasikara ity Coronavirus ity. Raha ny vaovao farany, nisy olona iray maty tany Burkina Faso, ny alarobia teo, ary tatsy Maorisy, omaly alakamisy, izay efa akaikin’i Madagasikara. Fepetra noraisin’ny fanjakana malagasy ny fanakatonana manontolo ny habakabak’i Madagasikara. Manampy izany, nampiomana ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) fa “mila miomana sy mandray fepetra hentitra ny firenena aty Afrika hiatrehana ny Coronavirus”. Nohitsin’ny tale jeneraliny, i Tedros Adhanom Ghebreyesus, fa efa misy mihitsy ny olona maty aty Arika fa tsy voaray lisitra ofisialy… Manoloana ireo, mila miomana tsara hiatrehana ny ho avy, izay tena ho ratsy ho an’ny firenena afrikanina”.
Basikety-NBA: tafakatra famaranana ny ekipan’ny Lakers 28/09/2020
Tsy haha taona fotsy ny 2020: hotanterahina ny “Rallye international de Madagascar” 28/09/2020